Wasiirka Amniga K/Galbeed: "Anaga ayaa dalbanay Ciidamada dowladda, kuwa kalena wau imaan doonaan Baydhaba.." - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Wasiirka Amniga K/Galbeed: “Anaga ayaa dalbanay Ciidamada dowladda, kuwa kalena wau imaan doonaan Baydhaba..”
Wasiirka Amniga K/Galbeed: “Anaga ayaa dalbanay Ciidamada dowladda, kuwa kalena wau imaan doonaan Baydhaba..”
Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Maxamed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ciidamo geysay magaalada Baydhabo uu dalbaday Maamulka Konfur Galbeed .
“Argagixisada Al-Shabaab waxa ay doonayaan inay falal amni darro ka geystaan deegaanada Koonfur galbeed, ciidankana waxa ay ka shaqeyn doonaan amniga, ciidanka la keenay waxa ay u yimaadeen sugidda amniga, dowladda Goboleedka Koonfurgalbeed ee Soomaaliya waxa ay ka midtahay dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah federaalka, wax dhibaato ahna kuma qabno ciidamada naloo keenay oo ka shaqeynaya Nabad gelyada”. ayuu hadalkiisa ku daray.
Dhanka kale Wasiirka Warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo la hadlay Warbaahinta Dowladda ayaa isna sheegay in Ciidanka Koofur Galbeed iyo Ciidanka Booliska ah ee la geeyay maanta Baydhabo ay iska kaashan doonaan Sugida Amniga iyo ladagaalanka Aragagixisada Al-Shabaab.
Ilaalada Xeebaha Giriigga oo ku howlan badbaadinta Gabdho Soomaali ah oo Badda isku tuuray